HOME > जापानी नागरिकताको लागि आवेदन दिदा
धेरै विदेशीहरू हामीलाई नागरिकता आवेदनबारे सोधछन । उहाहरु को प्रस्न हामीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छौ/सक्दैनौ भने हुन्छ?
सबैलाई तिनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ/सक्दैन भनेर थाहा पाउन्न चाहन्छ। तिनीहरूले यसको लागि अहिलेनै आवेदन गर्न चाहन्छ। तिनीहरूले आवेदनको लागि लागू हुने तरिका थाहा नभएमा के गर्नु पर्छ जान्न चाहन्छ। आवेदनको अवस्था बुझ्न आवश्यक छ।
विदेशीको लागि आवेदनको अवस्था निम्न हुन् :"सामान्य विदेशी"को अर्थ जापानी नागरिकसंग विवाह नगर्ने विदेशीहरू सबै हुन् |
विदेशी जो अविवाहित छ, विदेशी जो विवाहित छ , त्यसलाइ "सामान्य विदेशी" मा वर्गीकृत गरीन्छ , उदारण विएत्नामी र कोरिएनको विवाहित जोडी|
हामीलाइ प्राय सोधिने गर्छ "परिवारका सदस्यहरू संगै आवेदन गर्नु जरुरि हुन्छ ?"आफु मात्रको आवेदन गर्न पनि सकिन्छ|आफ्नो मात्र आवेदन गरेर जोडीको र बच्चाको नगरेपनि हुन्छ| आफ्नो र बच्चाको आवेदन गरेर आफ्नो जोडीको नगरेपनि हुन्छ खाली एकजनाले मात्र आवेदन गरेपनि हुन्छ|
विवाहित दम्पतीले एकले अवस्था पूरा गरेमा र अन्यले नगरेको मामलामा, विवाहित दम्पती दुवै मिलेर आवेदन लागू गर्न सक्षम हुन सक्छ। विदेशीले जापानी नागरिकसंग विवाह गर्न सक्छ येदि तपाइको आवेदन खारिज भएपनि। जापानी संग विवाह गर्ने विदेशी विरुद्ध अवस्था कम गंभीर हुन्छ । त्यसैले जापानी नागरिकसंग बिवाह गर्ने विदेशीले सबै आवेदनको अवस्था पूरा गरेमा , विवाहित दम्पती दुवै मिलेर आवेदन लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
●यसलाई जापानी नागरिकतामा लागु हुने अवस्था बुझ्न आवश्यक छ
・पहिलो अवस्था निवासी कुरा बारे छ।
・५ वर्ष को लागि जापान निवासी ठेगाना हुनुपर्ने बारे
विदेशीहरु ५वर्ष लगातार जापान बसेको हुनुपर्छ । "लगात्तार " महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, एक विदेशीले तीन वर्षसम्म जापानमा बसेको थियो र पछिको एक वर्ष अरु देशमा ,र त्यसपछि दुई वर्ष जापानमा बसे भनेपनि लागू गर्न सक्दैन।एस्तो मामलामा अगाडिको तीन वर्ष गनिदैन,पछि को २बर्ष जोडी त्यसपछि 3वर्ष नपर्खी हुदैन |
जापानमा कर्मचारीको रुपमा काम गरेको तीन वर्ष भन्दा बढीभएको हुनुपर्छ,पार्ट टाईम काम गरेको हुनुहुन्न| सम्झौता कर्मचारी वा अस्थायी कर्मचारी स्वीकार्य गरिन्छ| जापान तिन वर्षसम्म भन्दा बढी काम गरेको भए हुन्छ|
・अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा २ वर्ष र कर्मचारीको रूपमा ३ वर्ष को लागि बस्नु भएकोछ भने , अवस्था पूरा गर्छ|
जहाँ अर्को तर्फ़
・विदेशी जो पाँच वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रुपमा र दुई वर्ष कर्मचारीको रूपमा बस्नु भएपनि अवस्था पूरा गर्दैन।
कर्मचारीभएको तीन वर्षसम्म आवश्यक हुन्छ, त्यसैले यस्तो विदेशीले थप एक वर्षको लागि कर्मचारीको रूपमा काम गर्न आवश्यक छ।
धेरै पटक काम परिवर्तन गरेपनि फरक पर्दैन,तर हालै परिवर्तन गरि आवेदन गर्न मिल्दैन कम्तिमापनी १ वर्ष कट्न जरुरी हुन्छ आवेदन गर्नको लागि।
पाँच वर्ष बित्त्र जापान छाडेर गएको दिन को संख्या पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण छ। जापान छाडेको तीन महिना भन्दा बढी कुनै कारण बस बच्चा जन्मौना , भूकम्पका कारण , व्यापार यात्रा सम्बंदी अधि इत्यधि भयोभने अस्वीकृत गरिनेछ। तीन महिना भन्दा बढीको लागि जापान छोडेमा जापानमा बसेको अवधि सुन्य बनाउँछ। विदेशीले वर्षमा १५० दिन भन्दा बढी जापानमा नभएमा, माथि उल्लेख जस्तै कुरा हुन्छ ,तिन महिना भन्दा समय कमनै भएपनि.उदारण विदेशीले जापान बाहिरिएको दिन दुइ महिना हरेकपल्ट बर्समा चार पटक सम्म गरेमा जापान छाडेको दिनको संख्या २४० दिन हुनपुग्छ , यी सब कुराहरुका कारण अस्वीकृत हुनसक्छ|
एक पटकमा ३महिना भन्दा बढीको लागि आउँदा धेरै पटक सोधिने प्रस्न, कम्पनीको विजनेस ट्रिपका कारण भन्छन्ं। कम्पनीको आदेशका विजनेस ट्रिप भएपनि असम्भव हुन्छ। भिसा पनि सकिएको छैन,३ महिना जापानमा थिएन, घरभाडा पनि सधै तिर्ने गर्थे भन्ने कुरा गरेपनि अस्वीकृत हुनेछ।
१०वर्ष भन्दा बढी जापान बस्नु भएका विदेशीहरुलाई कामको अनुभव १वर्षभन्दा बढी भएमा पर्याप्त हुन्छ।
उदाहरणका लागि, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा9वर्षको लागि र कर्मचारी को रूपमा 1 वर्ष जापान बस्नु भएको त्यो विदेशी जापानमा दस वर्ष को लागि बस्ने मानिन्छ, र यो लागू गर्न पर्याप्त छ। एक विदेशी 10 भन्दा कम वर्ष जापान बस्ने भएको छ भने, तीन वर्षको काम अनुभव पक्कै आवश्यक छ।
जापानी संग विवाह गर्नु भएका विदेशीको लागि, अवस्था कम गंभीर बन्न पूग्छ।
अवस्था कम गंभीर हुदैमा कागजातको काम कम हुन्छ भन्ने हुदैन ।आवेदन दिने प्रक्रिया एउतै हो। आवश्यक कागजात को संख्या अज धेरै हुन जान्छ किनभने जापानी संग विवाह गरेको हुनाले|
प्राकृतिक(जापानी नागरिकता ) लागि अवस्था सजिलो छ तर आफै मा प्रक्रिया सबै सजिलो छैन
सर्वप्रथम, जापानी नागरिक संग बिहे गर्ने विदेशीलाई निवासका आवश्यकताहरूको निवारणको अवस्ता कम गंभीर हुन्छ।
सामान्यतया, विदेशीहरु जापानमा ५वर्ष भन्दा बढी बसेको अवस्था हुनुपर्नेछ।
जपनिसंग विवाह गर्ने विदेशी
・३वर्ष भान्दा बधि जापनमा घर ठेगना भएको र तत्काल पनि हुनुपर्नेे ।
उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा तीन वर्ष जापान बस्दै हुनुहुन्छ ,जापानी संग विवाह गरे लगाएत आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। तीन वर्षसम्म जापानमा बस्नु भएक बिदेसीले जापानी नागरिक संग बिहे गरेमा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। विवाह पछि तीन वर्ष तीन वर्ष कुर्नु जरुरि छैन |बिहे भएपछि ३ वर्ष नकुरी हुदैन भन्ने मानिसहरुपनि धेरै छन्ला,त्यो गलत हो | तीन वर्षसम्म जापानमा बस्नु भएको छ, जापानी संग विवाह गर्नु लगाएत भिसा प्राप्त गर्न सम्भव छ।
विवाह गरेको ३ वर्ष बादी भयो तर जापानमा ठेगाना बनको १ वर्सा भन्दा माथि
जापानमा बसेको एकवर्ष मात्र भएतापनि जापानी नागरिकसंग विवाह भएको ३वर्ष कटेमा आवेदन गर्न सकिन्छ। उदाहरण विदेशमा जापानीसंग बिहे गरेमा, उदाहरण जापानी नागरिक भियतनाममा बस्दैगर्दै, भियतनामी नागरिक र जापानी नागरिक भियतनाममा बिहे गरेको खण्डमा, जापानी नागरिक र भियतना मी नागरिक बिहेगरि २वर्ष भियतनामा बसी, दुबै जापान फर्केर १ वर्ष जापान बसेमा आवेदन गर्न सकिन्छ।
जापानी नागरिकसंग बिहे भएतापनि विगतमा ओभरस्ते भएका हरु विशेष अनुमति पाई बस्दै आएकाहरु पनि छन्। तिनीहरू कोलागिे अनुमति पाएका दिनदेखि दसवर्ष कटिनु अवसेक हुन्छ। यस मामलामा, तीन वर्षमात्र बितेकोछ भने, लागू गर्न नमिल्ने हुँदा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ।
②	次は2番目の条件です。दोस्रो शर्त हो
दोस्रो अवस्था, २० वर्ष भन्दा माथि भएको
③	3番目の条件は素行要件です。 तेस्रो अवस्था व्यभाहर संबंदी हो
विदेशीको व्यक्तित्व असल हुनुपर्दछ। समयमा कर तिर्ने र कुनै आपराधिक कार्य नगर्ने. उदाहरणका लागि, विश्वसनीय हुनुपर्छ। कर्मचारीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा निवासी कर भुक्तानी प्रतिष्ठा हो। जोडी को कर भुक्तानीको प्रमाणपत्र पनि आवश्यक छ। विवाहित दम्पतीले एकले कर भुक्तानी र अन्यले नगरेमा आवेदन अस्वीकृत हुनसक्छ।
भुक्तानी ध्यान हुनुपर्छ जो निवासी कर, मा परिवार को समर्थन गर्ने विदेशीले छ। तपाईं परिवारको समर्थक हुनुहुन्छ भने, आफ्नो रोक्काको रेकर्ड जाँच गर्नुहोस्। कहिलेकाहीं, विवाहित दम्पती एक अन्य कर सस्ता हुन्छ किनभने भाग समय काम गर्छ जसले समर्थन गर्छ। यो जोडीलाई जसको वार्षिक आय भाग समय काम गरेर 13,00,000 येन भन्दा छ समर्थन गर्न असम्भव छ। तर, यो शायद यस्तो पति अझै पनि समर्थन छ हुन। यस मामला मा, संशोधन फिर्ती आवश्यक छ। आफ्नो देशमा उनको / उनको आमाबाबुले समर्थन गर्ने एक विदेशी ध्यान पनि छ। एक विदेशी उनको / उनको आमाबाबुले विधिवत समर्थन यदि कुनै समस्या छ। तर, यो एउटा समस्या पनि एक विदेशी आमाबाबुको पैसा पठाउन छैन विदेशीहरू यो के बहाना यदि हुनेछ। एक विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा स्थानान्तरण सेवाको रेकर्ड पेश गर्न आग्रह किन यो छ।
निवासी कर,बारेमा परिवारलै समर्थन गर्ने विदेशीमा ध्यान दिनु पर्छ।येदि तपाईं आफ्नो परिवारको समर्थक गर्नुहुन्छ भने, आफ्नो रोक्काको रेकर्ड जाँच गर्नुहोस्। कहिलेकाहीं, विवाहित दम्पतीमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्छन किनभने एसो गर्नाले कर सस्तो पर्छ । वार्षिक 13,00,000 येन भन्दा बडी छ भने सहयोग गर्न असम्भव छ। सहयोग गर्ने सयेदै कम हुन्छन । यस मामलामा, संशोधन फिर्ती आवश्यक छ। आफ्नो देशमा आमाबाबुलै पनि सहयोग गर्ने एक विदेशी को पनि वास्ता ध्यानमा राख्नु पर्छ । एक विदेशी उनको आमाबाबुले विधिवत समर्थन नगर्दा कुनै समस्या हुदैन । तर, यो एउटा समस्या हुन्छ जब एक विदेशी आमाबाबुलै पैसा नपठाए पनि पठाको बहाना गर्छन । त्येसैले एक विदेशीको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा स्थानान्तरण सेवाको रेकर्ड पेश गर्न आग्रह गरिएको हो ।
कम्पनी का प्रबंधक वा मालिकले आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसायी कर दुवै तिर्नु पर्छ।
④交通違反に注意 ट्राफिक उलंघन बारेमा ध्यान पुर्याउनुहोस्।
ट्राफिक लाइसन्स नभएका विदेशीले यसको बारेमा चिन्ता गर्न पर्दैन। पछिल्लो ५ वर्षमा ट्राफिक उल्लंघनको रेकर्ड जांच गरिन्छ। ५ वर्ष पहिलेको रेकर्डको झाँच हुँदैन। ५ वर्ष अघिसम्म कति पटक तपाईंले ट्राफिक उल्लङ्घन गर्नु भएको छ? ५ वर्ष मा ५भन्द कम चोटि उल्लंघन गर्नु भएको छ भने फरक नपर्न सक्छ तर ५ वर्षमा ६ भन्दा अधिक पटक उल्लंघन भएमा जापानी नागरिक्ता पाउन गार्हो हुन्छ।
ट्राफिक उल्लंघन भन्दा अन्य कारण (जस्तै चोरी, सडकमा झगडा) को लागि प्रहरी कारवाही मा परेका विदेशीहरू छन्। यदि तपाईं आफ्नो आपराधिक रेकर्ड ले चिन्तित हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई परामर्श गर्न नहिच्किचाउनुहोस्।
⑤年金支払い状況 पेन्सनको भुक्तानी स्थिति
विदेशी ले पेन्सन तिर्ने नतिर्ने , प्राकृतिकरणको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि कम्पनीले कर्मचारी को पेन्सन तलबबाट कटौती गरिएको छ भने, कुनै समस्या हुदैन।तर कुनै कम्पनीले कर्मचारीको पेन्सन तलबबाट कटौती गर्दैनन् भने यस्तो कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी आफैद्वारा राष्ट्रीय पेन्सन भुक्तानी गर्न पर्छ। पेन्सन नतिर्ने विदेशीहरू पनि धेरै छन्। यस्तो विदेशीले कम्तिमा गत वर्षको पेन्सन भुक्तानी गरी प्राकृतिकरणको निवेदन दिन सक्षम हुन्छन्। राष्ट्रिय पेन्सन को शुल्क हरेक महिना 18,000 येन र वार्षिक रकम 2,00,000 येन हुन्छ।
कम्पनी को प्रबन्धकले कर्मचारीको पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाको कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
⑥生計要件 धनसम्पत्ति सम्बन्धि
धनसम्पत्ति सम्बन्धि भन्नाले आफु र सँगै बस्ने परिवारका सदस्यहरूलाई पर्याप्त आय के छ र कति भएमा जीविका चलाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धि कुरा हो। धेरैजसो बचत कति छ भनेर सोधिने गर्छन, तर बचत धेरै भएपनि थोरै भएपनि फरक पर्दैन, तपाईँको स्थिर काम र हरेक महिना पर्याप्त आय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्झौता कर्मचारी, वा अस्थायी कामदारको रूपमा मासिक कम्तीमा १,८०,००० येन हुन्छ भने, तपाईँहरुले लागूगर्न सक्नुहुन्छ।तर काम नभएका विदेशीले लागूगर्न सक्दैन काम पाएपछि लागूगर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको प्रबन्धक निर्देशकले आफ्नो थप बोनस/क्षतिपूर्ति(compensation/renumeration)जोडेर मासिक १,८०,०००यन जापानी नागरिकता (naturalization) प्राप्त गर्न पर्याप्त हुन्छ।
विदेशीहरू अक्सर हामीलाई घर किन्न हुन्छ या हुन्न भनेर सोध्नु हुन्छ र हाम्रो जवाफ घर आफ्नै भएपनि भाडाकै भएपनि फरक पर्दैन। यसले जाँचमा प्रभावित गर्दैन।
विदेशीहरूले जापानलाई नोक्सान पुर्या्उने वा नाश पार्ने कुनै पनि खतरनाक विचार गर्नुहुँदैन।
⑦　最後7番目 अन्तिम सातौं अवस्था
विदेशीले जापानी भासा पढ्न र लेख्न सक्षम हुनुपर्छ, बोल्न सक्षम नहुनु भएपनि पढ्न र लेख्न सक्षम हुनुपर्छ। विदेशीहरुको जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षणको स्तर N3 बराबरको भएमा समस्या हुँदैन।
जापानको नागरिकता कसरी पौने बारेमा थाहा छ ?केही विदेशीहरू ले पहिले नै अवस्था पूरा गरेका छन्, र केहीले अहिलेसम्म छैन। परिणाम प्राप्त गर्न एक वर्ष देखि 10 महिना लाग्न सक्छ।